I-Boeing kunye ne-ALAFCO zigqibezela iodolo yejethi ezingama-20 737 MAX 8
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Boeing kunye ne-ALAFCO zigqibezela iodolo yejethi ezingama-20 737 MAX 8
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • Iindaba zeKuwait Breaking • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Technology • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-ALAFCO esekwe eKuwait, umboneleli wehlabathi weemveliso zokuqeshisa iinqwelomoya, ngoku ine-40 737 MAXs ngokulandelelana.
Inkampani ye-Boeing kunye ne-ALAFCO yoQeshiso loQeqesho kunye neNkampani yezeMali (i-ALAFCO) igqibezele iodolo yama-20 eyongezelelweyo engama-737 MAX 8s kwi-2017 Dubai Airshow, iphinda-phinda incwadi yoku-odola umcebisi wenqwelomoya ye-MAX.
I-ALAFCO esekwe eKuwait, umboneleli wehlabathi weemveliso zokuqeshisa iinqwelomoya, ngoku ine-40 737 MAXs ngokulandelelana. Isivumelwano esixabisa i-2.2 yezigidi zeedola kuluhlu lwamaxabiso akhoyo, sabhengezwa njengezibophelelo kwiParis Air Show.
"Abathengi bethu baxhomekeke ekusebenziseni ipetroli, ukuthembeka kunye neendleko zokusebenza eziphantsi ukuze baphumelele kwaye inqwelomoya ye-737 MAX iyakufezekisa iimfuno zabathengi bethu, kwaye ixhase ukukhula kwe-ALAFCO kwikamva," utshilo u-Adel A. Albanwan, uSekela Gosa eliyiNtloko yesiGqeba, i-ALAFCO. "Sibe nempumelelo nosapho lwama-737 kwixa elidlulileyo kwaye siqinisekile ukuba i-737 MAX izakuqhubeka nokunceda ukukhulisa ishishini lethu."
Intsapho ye-737 MAX ibonelela ngobume obukhulu, ukuthembeka kunye nokusebenza kakuhle kwimakethi ye-single-aisle, ineepesenti ezisibhozo zeendleko zokusebenza eziphantsi kunoyena mntu ukhuphisana naye ophambili.
"Siyavuya ukukhulisa intsebenziswano yethu ne-ALAFCO kwaye sixhase ukwandiswa kweenqanawa," utshilo uMongameli we-Boeing Commerce kunye ne-CEO uKevin McAllister. "Amandla e-737 MAX 8 ukubhabha aqhubeke ukhuphiswano ngelixa besebenzisa ipetroli encinci sesinye sezizathu zokuba abathengi abanjengo-ALAFCO bancede ukwenza i-737 MAX ibe yinqwelomoya ethengisa ngokukhawuleza kwimbali ye-Boeing."
I-737 MAX igqithile kwii-odolo ezingama-4,000 zizonke ukuza kuthi ga ngoku. Usapho lwe-MAX lubandakanya itekhnoloji yamva nje ye-CFM ye-LEAP-1B yeenjini, iipiko zobuchwephesha eziPhambili kunye nolunye uphuculo lokuhambisa ukusebenza ngokukuko, ukuthembeka kunye nokuthuthuzela abakhweli kwimarike yendlela enye.